Workout Planner by Muscle Booster အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
3.0 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（141.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Workout Planner by Muscle Booster
သင်သည်အိမ်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အားကစားရုံသို့ဝင်သောအခါ၊ Muscle Booster ၏လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ algorithm သည်သင့်အားအောင်မြင်မှုရစေရန်သင့်လျော်သောအစုံ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်နေရာများနှင့်အနားယူချိန်များမှတဆင့်လမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်။
Muscle Booster သည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်အသွင်အပြင်ကိုဂရုပြုပြီးကြည့်ရှု။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလူတို့အတွက်အထူးတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲသည်သင်ကိုယ်တိုင်သင်တန်းပေးသူအတွက်အစားထိုးဖြစ်ပြီးအိမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ အားကစားရုံ၌ဖြစ်စေကောင်းမွန်သောပုံသဏ္getာန်ရရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏ပန်းတိုင်များကိုသတ်မှတ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ ကြွက်သားတိုးခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုတက်ကြွစေရန်။ သင်လုပ်ဆောင်လိုသောဇုန်များ၊ ပခုံးများ၊ ရင်ဘတ်၊ လက်မောင်း၊ ကျော၊ သင့်အသက်တာ၊ အရွယ်၊ အလေးချိန်၊ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်စသည်တို့ကဲ့သို့သောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို
ကြွက်သားသည် BOOSTER မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
သင်၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအရကျွန်ုပ်တို့၏ smart algorithm သည်သင်၏ကိုယ်ထည်ကိုမြှင့်တင်ရန်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးမည့် cardio၊ အစွမ်းသတ္တိ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် LISS (လမ်းလျှောက်၊ အပြေး၊ စက်ဘီးစီးခြင်း) လေ့ကျင့်ခန်းပေါင်းစပ်ထားသောကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။ ရလဒ်။
အခြေခံအစီအစဉ်ကိုမင်းအတွက်ဖန်တီးပြီးသင့်ပြက္ခဒိန်တွင်ပြလိမ့်မည်။ သင်၏တိုးတက်မှုနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များအရအပတ်တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုအသစ်ပြောင်းမည် (အကယ်၍ ယခင်လေ့ကျင့်မှုများကသင့်အတွက်အလွန်ခက်ခဲလွန်းသည်သို့မဟုတ်ခက်ခဲလွန်းလျှင်) ။
ဘာအသစ်လဲ Workout Planner by Muscle Booster 2.0.0
How to do less than 10 minute simple daily exercise at home using Muscle Booster app - Day 1
Muscle Booster, Etc.
How to do less than 10 minute simple daily exercise at home using Muscle Booster app - Day 3
how to get free plan on muscle booster
Lio tech & Games.
How To Install Workout Planner by Muscle Booster App for PC [Windows/Mac]
How to do less than 10 minute simple daily exercise at home using Muscle Booster app - Day 4
Muscle Booster Workout Planner 1.14.1
Muscle Booster Workout Planner 1.14.0
Muscle Booster Workout Planner 1.13.1